Afeerraa Irbaataa: Dargaggeessa galma 'Gabataa la Shaggar' midhaasse - BBC News Afaan Oromoo
Afeerraa Irbaataa: Dargaggeessa galma 'Gabataa la Shaggar' midhaasse
Image copyright Biruuk Amduu
Biruuk Amduu jedhama. Ogeessa waltajjii, sagalee fi ifaati. Namoota qophii afeerraa irbaataa birrii miliyoona shanii moggaasa 'Gabataa la Shaggar' jedhuun kaleessa masaraa mootummaa keessatti taasifame dudduuba jiran keessaa tokko.
Galma afeerraan irbaataa keessatti taasifame kan faaye, waltajjii kan tolcheefi kan miidhagse akkasumas sagalee fi ibsaa kan sirreesse dhaabata isaa 'Jubilee' jedhamudha.
Hojichi walumaagalatti guyyoota 6 nutti fixe kan jedhu Biruuk, MM Abiy guyyaa guyyaan dhufanii hordofaa akka turaniifi qajeelfama isaaniin akka hojjetame hima.
Galmi haala bareedaa ta'een keessummoota 300 keessummeesse kun duraan onaa ture jedha Biruuk.
Affeerraa irbaata birrii miiliyoona shani
"Hojii osoo hin eegaliin dura seenaan galma sanaa maal akka ture qorachuun nurra ture. Kunis halluuwwan fayyadaman, gosa ifaa akkamii akka fayyadamnuufi haala seenaa duraanii mul'isuun akka hojjannu nu gargaare" jedha.
Seenaan duraanii osoo hin dhokatiin meeshaalee ammayyaan akka faayamu goone jedha.
Afeerraan irbaatichaa magaalaa Finfinnee magariisa gochuuf waan ta'eef, galma sana halluu magariisaan miidhagsuuf biqiltoota bakka bakka kaa'uu isaanii hima.
Suni qilleensi gaariin akka jiraatuufi bosona keessa akka jirtu akka sitti dhagaa'amu taasisas jedha.
Ifaanis bifa nama hin jeeqneen seensa irratti iddoo namni suuraa ka'utti ifaan heedduun akka jiraatu taasifameera jedha.
Sanarraa kan hafe bakka hedduutti ifa duungoo fayyadamuun galmicha akka faayan hima.
Baandiin muuziqaa taphatu baandii aadaa waan ta'eef sagaleen meeshaalee muuziqaa aadaa meeshaalee elektirooniksii ammayyaa keessa osoo hin jeeqamiin akka darbu gochuun hojii salphaa hin turre jedha.
'Kormee, abdii qabda'
Hojichi baay'ee dadhabsiisaa ture kan jedhu Biruuk erga xumuraniin booda tasa MM Abiy dhufanii akka hin jaalanne nutti himani jedha.
Xiyyeeffannaan keessummootaa warraa muuziqaa taphatan irra osoo hin taane iddoo fiilmiin waa'ee pirojekticha itti agarsiifamurra akka ta'u barbaadaani jedha.
"Kanaaf waltajjicha diignee irra deebinee akka haaraatti hojjechuun nurra ture."
Hojicha erga xumurree booda 'kormee, abdii qabda' wayita jedhaniin miirri addaa akka itti dhagaa'ame hima.
Xumura sagantichaa irratti weelliftoonni gameeyyii akka Mohaammud Ahimadii fi Alamaayyoo Isheetee sirba 'Itoophiyaa Hageree' jedhu yoo sirban ammoo miirri baay'ee adda ta'e itti dhagaa'amuu hima.
Hundaa ol garuu MM Abiy "akkuma nama kaanii dhaabbatanii keessummoota simachuun isaanii, erga sagantaan xumuramee boodaf uffata jijjiirratanii dhufanii warra galma qulqulleessaa jirru nu ilaaluun isaanii na ajaa'ibsiiseera" jedha.